iimveliso China New yelulwa Bar LCD ukubonisa sigange ledijithali WiFi kunye Android OS5.1 14.9-86 intshi mveliso kunye nabenzi | SYTON
Izikrini ezimbini ezijingayo
Imiqondiso yeDijithali eSongekayo
Ukuma komgangatho ojikelezayo
Udonga olunyuswe nge-LCD
Live stream Isixhobo
I-LCD yeVidiyo yeDonga
UkuNakwa koBuso ngeSilinganiselo soBubushushu
I-Bus Ceiling inyusiwe
Ibha eyoluliweyo LCD
Bar Screen nangengalo
iimveliso ezintsha yelulwa Bar LCD ukubonisa sigange ledijithali WiFi kunye Android OS5.1 14.9-86 intshi
unyaka 1 ukunikezelwa warrantya fter
inkxaso Video yobugcisa, inkxaso Online
bar LCD ukubonisa
6000 Piece / Pieces Inyanga nganye
Ebhengeza umdlali / imiqondiso ledijithali touch screen zidla zipakishwe kwimeko ngomthi kunye icala ikhathuni.
Ubungakanani (Pieces) 1 - 40 > 40
Est. Time (iintsuku) 20 Ukuze-thethwana
Bonisa Box size (ngentando) Ulwandlalo: 49,4 × 12,62 × 1.64cm
indawo Bezel: 47,4 × 9.76cm
Indawo esisebenzayo: 47.3 × 9,66 cm
ubukhulu panel 15 19 24 28 38 44
isisombululo LCD 1920x388p
angle Visual 85 ° Ekhohlo / Ekunene / Up / Ezantsi
ukugqama 250 noonomoyi
Ubomi bonke 50,000-60,000 awa.
In / isiphumo USB, ikhadi SD slot, uqhagamshelwano lwetshiphu e
Somlomo 2pcs x 5W
format iifayile inkxaso MP3, mp4 AVI, Divx, H264, RMVB, JPG
ulwimi OSD iilwimi Multi-lizwe (optional)
Ukunikezwa amandla AC 100-240V
lobushushu Working 0 ° C-50 ° C
lobushushu yokugcina 20 ° C-60 ° C
Yelulwa Bar Monitors LCD - Information Further
Kwakhona ngokuba imiboniso ultra-ngokubanzi okanye nje esolula imiboniso, ezi ngefomathi entsha kunesiqhelo kwimiqondiso ebaleni lwedijithali. Ifomati eye wavumela imiqondiso yedijithali ukuba zisetyenziswe kuluhlu izicelo ezintsha ezifana namagama yeqonga kunye surtitles, iibhodi imenyu nzulu kunye nayiphi kuboniswa obala kunye nesithuba constricted ezifana kwiintsika emxinwa apho izikrini ungasetyenziswa ngobude.
video Mp4, AVI, Divx, VOB, MP, MPEG, RM, RMOV, DAT, RMOV, HDMOVA njl
Audio MP3, WMA, Ogg / AAC / AC3 ​​/ DTS / FLAC / nkawu
Ezixhaswayo Code Stream Max Resolution 1920 * 1080 @ 60Hz
Max bombala 24Bit
rate isakhelo Max 30frames / s
Max code stream isixhobo USB2.0: 2Mb / s
Ezixhaswayo ngokwezandi audio rate sample 32kHz, 44,1 kHz, 48kHz, 96kHz
isantya sebhithi 32hbps ku 384 kbps
elide 1.Payment: T / T-30% yentlawulo phambi imveliso, i-70% eseleyo kufuneka ihlawulwe ngolwandle emva kokuba zihlolwe.
2.Warranty: iinyanga 12 iwaranti kunye ubomi ixesha maintainance.
3.Certifications: ROHS, CE & FCC, SAA, ISO9001, iziqinisekiso IP65 bonke badlula.
4.MOQ: 1pc, ukuze isampuli bamkelekile ukuba novavanyo yakho.
1. Phendula imibuzo yakho i n -24 iiyure zomsebenzi.
2. Abasebenzi abanamava ukuphendula yonke imibuzo yakho abasazi IsiNgesi.
3. Imfuneko Elungiselelweyo iyafumaneka, OEM & ODM zamkelekile.
4. Exclusive kunye nesisombululo unique nga kunikwa umxumi wethu iinjineli zethu baqeqeshwe kakuhle kwaye zobungcali kunye nezibonda.
Kakhulu ezizodwa endle kwemveliso LCD, inkampani yethu yasekwa ngo-2005 Besisoloko ukuphuhlisa kunye necandelo lokuvelisa iimveliso LCD ukususela ngo-2005 yaye ebudeni bale minyaka siye saphuhliswa iimveliso zethu, ezifana umdlali LCD ad, touch screen kwivenkilana, ezinkulu-screen usifake, umatshini zokufundisa, bonke-in-nye PC, iintengiso imoto, wechat umdlali intengiso njalo njalo.
Ezi mveliso ziye ngokubanzi kusetyenziswa i-USA, Japan, eYurophu, mpuma Asia, kuMbindi Mpuma, Afrika kunye namanye amazwe kunye nemimandla. Ezi mveliso ezifanelekileyo ntengiso ngamaqela iindawo, ezifana izakhiwo, iivenkile, iihotele, iivenkile, izitishi kwimetro, izitishi ibhasi, izikhululo zeenqwelo-moya, iiteksi, iibhasi kunye nezinye iindawo nangaphandle.
Ukubonelela ngeenkonzo ngaphaya kokulindelekileyo abaxumi bethu ukuba iinjongo zethu. excelent zethu iinkonzo nasemva-intengiso iinkonzo ndayizuza thina iintliziyo abathengi ezininzi '-intengiso nganye.
Inkonzo elungelelanisiweyo sikunika uye wanceda abathengi bethu ehlabathini lonke basombulula ezininzi iingxaki waza wasinceda ukufumana umvuzo eziphakamileyo abo wena iimveliso kunye zethu.
Ithekhinoloji kushishino LCD okhula ngokukhawuleza. Zibheke kurhwebo lwehlabathi, siya kulandela iintsingiselo, growging kwaye bayazuza kunye nabathengi bethu provideing abathengi kunye neemveliso ezintsha kunye neenkonzo ezigqwesileyo e China.
Siyazi ukuba sidlule CE / CCC / ROHS / FCC / ISO9001 / IP65 njl
Q: Yeyiphi Code HS iimveliso zenu?
A: 8531200000 Umdlali LCD ad (LCD ividiyo ukubonisa)
Q: Yeyiphi uhlobo lokuhlola unako unganikeza?
A: SYTON uye iimvavanyo ezininzi ukusuka zokuthenga izinto ukuya kweemveliso ezigqityiweyo ngamasebe ahlukeneyo, njenge QA, QC, Umthengisi, ukuqinisekisa bonke abadlali imiqondiso zikwimeko kupheleleyo phambi ngolwandle. Kwakhona amukela sihlolwe ngulo mntu wesithathu elimisiweyo.
Q: Yintoni na ixesha lakho isiqinisekiso?
A: SYTON inikezela 1 kunyaka (omnye) isiqinisekiso esemgangathweni iimveliso ukususela kumhla wakho lokuthenga, ngaphandle kwabantu umonakalo nomkhosi majeure factor. Ukugcinwa kakuhle, qiniseka ukuba abadlali basebenzisa phantsi kweemeko eziqhelekileyo. Beyond kumatshini ixesha siqinisekiso, SYTON uya kunika inkonzo yolondolozo kunye nenkxaso yobugcisa (Hardware kunye nezinye iintlawulo kunokwenzeka, SYTON akayi kuthwala uxanduva)
Q: njani endiyihlawulelayor umyalelo?
A: amagama zethu intlawulo: T / T, Western Union, PayPal
1) Ukuze ukuze isampula: 100% T / T okanye Western Union kwangaphambili, PayPal nayo eyamkelekileyo.
2) Ngokuba umyalelo isambuku: 30% idipozithi T / T kwangaphambili, balance ngokucacileyo phambi zibathathe okanye ukuthunyelwa.
Thumela yakho Enquiry Iinkcukacha kwi Ngezantsi, Nqakraza " Thumela " Ngoku!
Previous: Metal istili Industrial VGA BNC AV 17 intshi LCD Monitor nomakhi
Okulandelayo: 9 intshi LCD screen headrest iintengiso taxi imiqondiso yedijithali
yelulwa Bar LCD Advertising Display
Hot yorhwebo New Ultra wazolula Lonke bar LCD ...
Quality High 14.9 Inch Portable Digital Nweba ...
14.9 Inch yelulwa Bar Uhlobo LCD Bonisa Touch ...
2018 Hot New Ultra Wide yelulwa Bar LCD Adver ...
bar advertising obhityileyo Ultra wolula LCD encinane ...
Eziphathekayo Digital 14.9 Inch yelulwa Bar Uhlobo L ...
Idilesi: Umgangatho we-2, 1 Bldg., Senyang Hi-Tech Science Park, No. 7 Rd.,
Gongming Office, Isithili esitsha saseGuangming, eShenzhen, Guangdong, China
Yangaphandle Digital seeMPawu Double , Interactive Kiosk , Self Service Interactive Kiosk , Interactive Touch Screen Kiosk , Touch Screen Interactive Kiosk , Screen Touch Kiosk,
molo, ndingakunceda njani kwi-digitla signage